Tokkummaa fi Jaalalli Amantootaa Humna Jabaa Qaba jedhu Hoogganoonni Amantii
Adoolessa 13, 2012
konferensii waldoota tokkummaa Oromoo MN
Konferensiin waggaa kan tokkummaa waldoota Kirsityaana Oromoo addunyaa 17ffaan kamisa darbe jechuunis Adoolessa 5 barra 2012 Minisootaa magaalaa Minneapolis keessa kan jiru waldaa Kirstiyaana Oromoo Minnesootaa keessatti Sirnaan banamee jira. Adoolessa ja’a sanbata galgala immoo galgala aadaa Oromoo jechuun amantoonni wayyaa aadaa uffachuu dhaan ayyaana sanaaf miidhagina addaa kennanii jiran.
Galgala aadaa Oromoo
Lubi waldaa kirsityaana oromoo Mimesootaa Luba Melkamu Nagarii konferensii sana eebbaan bananii jiran. Mata dureen konferensii bara kanaa “balbala banamaa Waaqayyo sii kenneera Eeyu illee cufuu kan hin dandeenye jedha”
Faarfannaan garaagaraa faarfattoota adda addaa akkasumas amantootaan faarfatamaa ture. Ayyanni baranaa adda kan isa godhu yeroo waldootiin rakkoolee uumamaniin addaan cabaa jiranitti si’a ta’u tokkummaa kana walitti fiduuf walii galteen amantootaa barbaachisaa ta’uu hoogganoonni amantii ibsanii jiran.
Gabaasa guutuu MP3 tuquun dhaggeeffadhaa.
Deebii gama waldaa Ebeenezer